Kan Daa, Kaa Dabool Daw ma Aha! – Rasaasa News
Dec 11, 2011 Kaa Dabool Daw ma Aha!, Kan Daa, kilil5.com, ogaden.com, ogadennet.com, ogadentoday.com, onlf.or, Qorahey.com, radiojijiga.com
Dawlada haatan ka jirta Ethiopia, waxay leedahay mucaarad badan oo dibadaha ku nool, kuwaas oo dacaayad u adeegsada Alada Internet-ka si ay dalka ugu abuuraan khalal siyaasadeed iyo colaad micna daro ah.
Hadaba, si ay dawladu u dhawrto degaanshaha dalka ugana ilaaliso dalka cadowga dhaw iyo kan dheerba, waxay saartay xayiraad dacaayada boggaga internet-ka [IP] ee ay isticmaalaan kuwa cadowga ku ah deganaanshaha dalka Ethiopia.
Degaanka Somalida Ethiopia waxaa jira boggag internet ah oo ay isticmaalaan xumaan abuurka jecel dhibaatada dalka. Boggaga laga xayiray in laga fiirsado Ethiopia, waxaa ka mid ah boggaga Ogaden.com, ogadennet.com, ogadentoday.com, onlf.org, Radiojijiga.com, kilil5.com iwm.
Boggagan oo kuligood adeegsada nidaam ay dhibaato ku galinayaan guud
ahaan Ethiopia, gaar ahaana degaanka Somalida Ethiopia ayaa waxaa saaran xayiraad.
Sababta, boggagan xayiraada loo saaray ayaa ah abuurid ururo siyaasadeed, kicin dadweyne iyo af lagaado masuuliyiinta Ethiopia, gaar ahaan kuwa dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Hadaba, sida aan xog ku helay, waxaa xayiraadii laga qaaday bogga Kilil5 oo isagu ka soo horjeeda nabad iyo horumarka afxumo joogta ah oo dhab ahayn ka fidiya masuuliyiinta degaanka Somalida Ethiopia.
Xayiraad ka qaadka bogga kilil5, ayaa dhabar jab ku noqonaya dadaalka nabadeed iyo horumarkii ka socday degaanka Somalida Ethiopia. Waayo boggani waxaa uu mucaaradnimada bilaabay nabadii degaanka ka dhacday ka dib.
Hadii ay dhab tahay in xayiraadii laga qaaday kilil5, waxaa iyaguna sugaya in xayiraada laga qaado boggaga kale ee mucaaradka, waayo isku hal dhibaato ayaa loo wada xidhay. Hadii qaarna la daayo qaarna la xayiro iyaga oo isku shaqo ku jira micno kale ayey arintaasi samaynaysaa.